Snapdragon 670: Qeexitaanka processor-ka cusub ee udub dhexaadka ah | Androidsis
Snapdragon 670: processor-ka cusub ee dhexdhexaad-dhexdhexaad ah
Qualcomm wuxuu hayaa awood aan muran ku jirin suuqa processor-ka. Hawl-wadeenadeedu waxay noqdeen dammaanad-qaad tayo leh oo loogu talagalay dadka isticmaala. Illaa iyo hadda, shirkaddu kama aysan dhawaaqin wax ku saabsan hawlwadeenadeeda sannadkan. In kasta oo xog la ogaa. Hadda, waxaan horeyba uga ogaanay wax badan oo ku saabsan Snapdragon 670, processor-ka cusub ee shirkadda.
Waxaan wajaheynaa qashin loogu talagalay bartamaha. Qeexitaankiisa ayaa horey loo muujiyay. Marka waxaan fikrad fiican ka heli karnaa waxa aan ka filan karno processor-kaan. Muxuu noo keenayaa Snapdragon 670?
Waxay u muuqataa taas Waa processor kaas oo gaari lahaa qeybta dhexe ama heerka dhexe ee heerka dhexe. Sidaa darteed, waxaa la filayaa inay noqoto mid awood badan isla markaana soo bandhigta waxqabadka wanaagsan ee qalabka. Maxay cadahay in ay noqon doonto processor kaas oo u noqon doona guul cusub astaanta.
Waa jab sideed-gees ah. In kasta oo xaaladdan ay qaybintu ahayn afartii iyo afartii caadiga ahayd. Qualcomm ayaa sharad ku gashay wax ka duwan markan. Waxaan leenahay dKryo 300 Dahabka Waxqabadka Sare kaas oo yeelan doona xawaare dhan ilaa 2,26 Ghz. Intaas kadib waanu kulmi doonaa lix diirk Kryo 300 Silver oo leh soo noqnoqosho dhan ilaa 1,7 GHz.
Lixdaan processor-ku waxay mas'uul ka noqon doonaan ilaalinta tayada tamarta processor-ka. Waxyaabaha sida qarsoodiga ah u ballanqaaday inay fiicnaanayaan. Waxaa sidoo kale laga faallooday inay yeelan doonto 1.024 KB oo ah L3 cache. Marka laga hadlayo GPU waxaan helnaa a GPU Adreno 615 oo leh ugu badnaan saacad ah illaa 700 MHz.Tani waxay noqon doontaa mid suurtagal ah mahadnaqa shaqada turbo ee ay ku jirto.
Waxaan sidoo kale helnaa a Modemka Qualcomm Snapdragon x2x, mahadsanid taas oo ay macquul tahay in lagu guuleysto soo dejiso xawaareyaasha illaa 1 Gbps. Intaa waxaa sii dheer, aaladaha sharad ku dhigaya Snapdragon 670 waxay lahaan doonaan keydinta UFS iyo eMMC 5.1. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, waxaan sidoo kale helnaa taageerada kamaradaha laba-geesoodka ah, 23 MP halkii shucuur
Qualcomm wax faallo ah kama bixin bilowga Snapdragon 670 ee suuqa. Waa suurtagal in calaamaddu ay ku soo bandhigi doonto processor-ka MWC 2018. In kasta oo tan aan weli la xaqiijin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 670: processor-ka cusub ee dhexdhexaad-dhexdhexaad ah
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu dalbado cuntada guriga
LEAGOO wuxuu si rasmi ah u soo bandhigi doonaa Android-kii ugu horreeyay ee leh 'Notch' Febraayo 26